Qarreefi Qeerroo – Ethipian Press Agency
Gaazexaan Bariisaa gaafdeebii barreessaafi barsiisaa dargaggeessa Nuraddiin Ibraahim wajjin taasise akka armaan gadiitti dubbistootasaatiif dhiyeesseeraa dubbisa gaarii. Gaaffii: Maqaa keerraa haa kaanuu? Deebii: Eeyyee, tole. Bariisaa Nuraddiin Ibraahimin jedhama. Godina Arsii Lixaa,...	Read more »
Tola ooluu jechuun yeroofi humna ofii kaffaltii ykn bu’aa tokko malee tajaajila hawaasaaf oolchuudha. Kunsi nama dhuunfaa ykn gareetiin kan taasifamu ta’ee, dhimmoota hawaas dinagdee furmaata hatattamaa barbaadanrratti ta’uu akka maludha hiikkoo...	Read more »
“Biiftuu jirtu sussuuku yoo bubbulan mudhuku” jedhe Oromoon Dargaggoo Raasimoo Kabaas ganamuma qaamaan hir’uu ta’ee dhalatus gorsa abbootii biiftuu jirtu sussuuku jedhu kana milkeessee addunyaa kaan muuddee badhaastuufi kaan qimmiiddee rakkistu injifachuuf...	Read more »
Imala dheeraa, daandii sakaallaan itti baay’atuufi qormaataan guutame, wal’aansoo jiruufi jireenyaa ulfaataafi ijibbaachisaan booda milkii argame. Halkan waan hinbariine fakkaatu sun bari’ee, tabbi waan irra hinbaane fakkaatu sun mijatee qormaanniifi gufuun jiruufi...	Read more »
Tiwiitariifi haala ittifayyadamasaa
Charinnat Hundeessaatiin Appilikeeshinoota yeroo dhiyoodhaa bal’inaan hojiirra oolaa jiran keessaa tokko tiwiitariidha. Tiwiitarii caalaatti namoota dameelee adda addaatiin dhiibbaa uumuu danda’an waan fayyadamaniif Gaazexaan Bariisaa haala ittifayyadamasaafi isaan walqabatanirratti Yuvarsitii Sayinsiifi Teknolojii...	Read more »
Baatuun dhiheenya kana sirna eebbaa Yunivarsitii Naannoo Oromiyaa keessummeessite waan takkaa hinbaramne ummatatti agarsiiftee tokko ajaa’ibsiiftee kaan immoo maalalchiifteetti. Ummanni eebba barattootaatiif galma yunivarsitichaatti Sanbata darbe walga’e milkiifi injifannoo dubartii takkaatiin miira...	Read more »
Hojii tokko hojjenne milkaa’ufis ta’e damee irratti bobbaanerraa milkiiwwan gammachiisoo ta’an argachuuf amaloota gaggaarii ta’an qabaachuun barbaachisaadha. Milkaa’inoonni nuti argannu kunneen immoo kan uumaan nuuf kennite ykn beekumsaafi muuxannoodhaan adeemsa keessa horanneerraa...	Read more »
“Mootummaan dargaggoota gargaaruuf tokko yoo tarkaanfate isaan ammoo lama sadii tarkaanfachuu qabu” -Dargaggoo Birraa Nurgii
Waldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa dargaggoota godinaalee Oromiyaafi Magaalaa Finfinneerraa walitti dhufaniin ijaaramee hojii erga jalqabee waggaa tokkoof ji’a sadii ta’eera. Waldaan dinagdee dargaggootaa cimsuurratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru kun yeroo ammaa...	Read more »
‘Mootummaa haaraan hundeeffamu ajandaa hojii uumuutiif dursa kennuu qaba” -Eebbifamtoota
Uumaafi dhalli namaa waliif waliin kan uumamanis iddoo tokko tokkotti daandii faallaa walii irratti yeroo walgufataniifi walsakaalan mul’atu. Kun badii ykn daandii jallinaa dhalli namaa faallaa uumamaa adeemuuf taasisuun kan dhufu yemmuu...	Read more »
Hikmat Fadluu: Barattuu guyyaa eebbashee ilmaafi badhaasa argatte
— September 18, 2021 comments off
Bu’aa ba’ii jireenya dhala namaa keessatti daandiin dheeraafi dadhabsiisaan addunyaa barnootaati. Namni tokko baratee sadarkaa olaanaarra qaqqabuuf yoo xiqqaate waggoota 15 mana barnootaa keessa turuu qaba. Haala qabatamaa amma magaalota keessa jiruun...	Read more »